मारुती सुजुकीले बचायो १७.४ करोड लिटर तेल, कसरी भयो यस्तो चमत्कार ? « Bizkhabar Online
मारुती सुजुकीले बचायो १७.४ करोड लिटर तेल, कसरी भयो यस्तो चमत्कार ?
13 June, 2022 10:56 am
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी मारुती सुजुकी इन्डियाले विगत आठ वर्षमा १७ करोड ४० लाख लिटर तेल बचत गरेको छ । यो अवधिमा मारुतीले रेलमार्गमार्फत देशका विभिन्न भागमा ११ लाख कार बिक्रीका लागि पठाएको छ । यसले ४ हजार ८ सय टन कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउन मद्दत गरेको छ ।
मारुतीको यो कदमले ट्रकको करिब १,५६,००० ट्रिप घटाएको छ र १७४ मिलियन लिटर इन्धन बचत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा, मारुतीले भारतका विभिन्न भागहरूमा बिक्रीको लागि रेलवेमार्फत रेकर्ड २.३३ लाख गाडी पठाएको थियो। मारुतीले रेलवेमार्फत पठाएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो खेप हो।
कम्पनीका एक वरिष्ठ अधिकारीले मारुतीले करिब आठ वर्षअघिदेखि रेलमार्गमार्फत देशका विभिन्न भागमा आफ्ना गाडी पठाउन थालेको बताए । कम्पनीले २०२०–२१ मा रेलवेमार्फत देशका विभिन्न भागहरूमा १.८९ लाख गाडीहरू पठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा यो संख्या २.३३ लाख पुगेको छ। यसरी २०२१–२२ मा कम्पनीको रेलमार्गबाट ​​हुने यातायातमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसरी विगत आठ वर्षमा कम्पनीले आफ्ना ११ लाख कार रेलमार्गमार्फत पठाएको छ ।
मारुती सुजुकीका कार्यकारी निर्देशक राहुल भारतीले रेलमार्गबाट ​​कार पठाउँदा कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुग्ने तथा सडकको जामबाट छुटकारा पाउने बताए । उनले २०१४(१५ मा कम्पनीले रेलमार्गमार्फत ६६ हजार कार पठाएको बताए । उनले भने कि कम्पनीले आफ्नो गाडी पठाउन रेलवेको उपयोग बढाउनेछ।
हाल कम्पनीले देशका विभिन्न भागमा पठाउने कारमध्ये १५ प्रतिशत रेलमार्गबाट ​​ओसारपसार हुने गरेको छ । कम्पनीसँग ४१ रेल रेक छन्। प्रत्येक रेकमा ३ सय गाडीको क्षमता छ ।